I-Lionfish, yonke into malunga nayo: iimpawu, ukhathalelo, ukutya, njl Ngeentlanzi
Namhlanje siza kuthetha ngentlanzi ekubonakala kwayo ibonakala ikakhulu kukuboniswa kunye nengozi. Imalunga nentlanzi yengonyama. Yintlanzi ehlala ihlala emanzini afudumeleyo kwaye inetyhefu. Kubangele ukufa okungenakubalwa kwizilwanyana kunye nomonakalo omkhulu ebantwini. Igama lezesayensi IPterois antennata kwaye singabosapho lweScorpanidaes, sibonisa kuwe ingonyama.
Ngaba ufuna ukwazi zonke iimpawu zale ntlanzi kwaye ifunyanwa phi?
1 Iimpawu zeLionfish
Kunokwenzeka ukuba le ntlanzi ibikhona ngengozi ifakiwe emanzini oLwandle lweMeditera kwaye, njengohlobo oluchasayo, ibe sisibetho nothando olukhulu kwezinye iintlobo zaselwandle nakwezokhenketho lonxweme.
Kwaye yile, nangona le ntlanzi ingadluli kwi-20 cm ubude kwaye ubunzima bayo bunqabile ukuba ngaphezu kwekilogram enye, bubonisa kakhulu kwaye buyingozi. Inamaphiko amade kakhulu emiphunga kwaye inemibala eyahlukileyo kakhulu, phakathi kwayo ibomvu, orenji kunye nemivimbo yayo emnyama emnyama.
Inkangeleko yonke yale ntlanzi luphawu lomngcipheko kwezinye iintlobo ezihlala emanzini afudumeleyo. Iimpiko zazo zangasemva zinemitha engenazo inwebu phakathi kwazo, nangona imitha yepectoral iyenza. Ineempondo ezinde entla kweliso ezilinganisa iimpondo ezenza le ntlanzi ijongeke iyingozi nangakumbi.
Esona sixhobo siphambili sokuzikhusela sihlala kwimiphetho yaso yangasemva eyi-18, kuba zibukhali. Ngokusebenzisa iingcebiso zamaphiko, ikhupha ityhefu ethi, ngenxa yezilwanyana ezinobungakanani obuncinci, iyabulala. Xa ukulunywa yile ntlanzi kuchaphazela izinto ezinkulu ezinje ngabantu, iyakwazi ukubangela iintlungu kwindawo ekuchaphazelekileyo, iingxaki zokuphefumla kunye nobucaphucaphu.
Ekuqaleni ingonyama ihlala emanzini afudumeleyo eendawo ezinamatye kunye neengqaqa zekorale zaseIndiya nasePacific. Emva kwelahleko ethile yohlobo oluthile lokuhamba, apho iintlanzi zihlala zimile, umnatha wokuloba okanye eminye imithombo enokubakho yokuhamba, le ntlanzi ifunyanwa kwindawo enkulu ehlamba amanzi oLwandlekazi lweAtlantic, uLwandle lweCaribbean kunye neMeditera.
Iindidi ezininzi zeentlanzi, ii-crustaceans kunye nee-mollusks zihamba ziqhotyoshelwe kumkhombe wenqanawa kwaye ziyakwazi ukuhamba ukusuka kwindawo yazo yendalo. Ukuba indawo apho bafika khona ineemeko ezikhuthaza ukuzala kwabo kunye nemeko elungileyo, ezi ntlobo ziya kuqala ukusasazeka njengesibetho kwaye zinokuchaphazela iintlobo zezilwanyana, zibasuse kwindalo yabo.
Ezi ntlanzi zivelisa ngokukhawuleza okukhulu kwaye ngenxa yokuloba ngokungakhethiyo nangokungekho mthethweni kweentlobo ezizingelayo ze-lionfish, ezinje nge-shark, ibangele ukuba le ntlanzi isasazeke kwiindawo ezininzi emhlabeni jikelele kwaye ube sisibetho nesoyikiso kwiintlobo zeentlanzi ezivela kwiindawo ezikufutshane nemifula ye-coral
Intlanzi yeengonyama ubukhulu becala itya kakhulu. Hunt inani elikhulu le-shrimp, ii-crustaceans kunye nezinye iintlanzi. Ndiyabulela kubunzima bayo bokukhanya kunye namaphiko ayo emqolo anetyhefu, inesakhono esikhulu sokuzingela amaxhoba ayo. Ngenxa yokubonakala kwayo kunye nemibala, inokufihlwa kufutshane namatye ngobunono obukhulu kwaye xa izingela, inesantya esikhulu sokubetha.
Ihlala yodwa kwaye inendawo enkulu. Ngokuqhelekileyo bazingela ebusuku okanye kusasa ekuseni ukuze bazifihle kwaye babe nethuba elikhulu lokuphumelela. Ukuphumla nokuzimela kumarhamncwa azimela phakathi kwemingxuma yasemaweni apho azimela khona.
I-Lionfish ineqela lokuzalisa. Kwaye kukuba, ngexesha lokudibana, iinkunzi zenza iqela apho zichumisa ukuya kuthi ga kwisibhozo seemazi. Amaqela okukhwelana avaliwe ngokupheleleyo kwaye ayindawo, ngoko ke, xa intlanzi ingonyama iyazikhwelana, kuyingozi kakhulu ukuya kwindawo yazo. Ukuba umntu oyindoda uzama ukungena kwiqela xa betshatisa, kuyakubakho umlo ongapheliyo apho omnye wabo anokugqibela ngokufa. Ophumeleleyo kulo mlo uya kuba nelungelo lokungena kwiqela labasetyhini.
Abafazi ziyakwazi ukuzala phakathi kwamawaka amabini namawaka alishumi elinesihlanu amaqanda kwaye amantshontsho azalwa kwiintsuku nje ezimbini emva kokubeka amaqanda, kungoko ke zizala ngokukhawuleza. Nangona uninzi lwamaqanda abekwa yimazi lutyiwa ngamarhamncwa, ukukhula kwenani labantu okufunyanwa loluhlobo kunobuhlungu.
Kwiindawo apho ezi ntlobo zihlala khona, kuyasetyenziswa izicwangciso zolawulo lwabemi beengonyama ukubuyisela ibhalansi yamanzi kunye nokungonakalisi ubudlelwane phakathi kweentlobo zaselwandle kunye nokusebenza kwazo.
Ngaphandle kwento yokuba i-lionfish inetyhefu, iyaziwa kwi-gastronomy yamanye amazwe. Kuyafana naye Iiblowfish, intlanzi iyabanjiswa ngenjongo yokupheka kunye nokulawula abantu.
Izitya ezenziwe nge-lionfish zixabiseke kakhulu, zombini ngenxa yencasa yayo ecekeceke nangobuchule bayo bokuyilungisa obucocekileyo kangangokuba ingcali kuphela enako ukuyipheka.
Kuya kufuneka ulumke kakhulu kwiityhefu ezivela kwityhefu efumaneka kwimiphetho yazo, njengoko zikwakhona kwisibindi kwaye zinokubulala xa zisetyenziswa. Iingcali ezisebenza ukupheka i-lionfish kufuneka ziyenze ngendlela ethe-ethe kakhulu yokuphelisa onke amadlala anetyhefu. Ukuba elinye lamadlala liyaqhekeka, Zonke iintlanzi azinakusebenziseka ekhitshini.
Baqala ukusasazeka baya eJapan, nangona namhlanje kukho amaphulo akhuthaza ukusetyenziswa kwawo kwi-gastronomy yamazwe amaninzi kufutshane noLwandle lweCaribbean.
Njengoko ubona, i-lionfish luhlobo oluyingozi kuzo zombini iintlobo ezihlala kwindalo nakubantu abafuna ukuzisebenzisa. Kubalulekile ukumisela ubuninzi bezi ntlanzi ukuze uthando lwabo lube lincinci kwaye ibhalansi yendalo ibuyiselwe.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Intlanzi yeengonyama